Tsirim-panantenana | NewsMada
Fahavitan-tena amin’ny sakafo, indrindra eo amin’ny vary. Hevitra efa novoizina tany aloha tany saingy tsy mbola tanteraka mandraka ity ny androany. Hanoanana sy tsy fanjarian-tsakafo aza no manjo ny vahoaka maro anisa, amin’izao fotoana izao. “Politikan’ny kibo”, hoy ny Pisodia, “filamatry ny revolisiona socialista” nataon’ny Arema, “revolisiona maitso”, hoy i Ravalomanana Marc. Nofohazina indray io ankehitriny rehefa rava noho ny korontana politika. Misy tetika sy lamina maro mifameno hampahomby azy ka tanjona ny hampiakarana ny voka-bary isaky ny hekitara. Zara raha telo taonina izany eto amintsika kanefa any Japana, any India sy any Vietnam, ary any Sina ohatra, efa ho folo taonina ny miakatra. Aondrana any ivelany ny ambim-bava.
Entanina ny tantsaha malagasy hampiasa teknika fambolena mifanaraka amin’ny toetrandro. Toy ny fanaovana ketsa toratady fa tsy atao fafy katrana fotsiny. Eo ihany koa ny fampiasana milina trakitera. Efa nanaovana “opération” izy ity fa lasa niafara amin’ny resaka kolikoly avo lenta. Hametraka orinasa manamboatra izany eto ny mpiara-miombon’antoka indianina. Mety hahomby kokoa izy ireny raha hiasana amin’ny velaran-tany midadasika, ny ankamaroan’ny mpamboly malagasy anefa, zara raha manana tany “iray dia” hoy ny fitenenana. Lazaina azy ireo koa fa tsara ny mampiasa masomboly voafantina, mahatosika ny aretina mety hitranga ary mahazaka ny fiovan’ny toetr’andro. Manampy izay ny fampiasana zezika natoraly. Mila vola avokoa izany rehetra izany. Ireo banky misy anefa, matetika mamatsy vola ny varotra sy ny indostria fa tsy matoky loatra ny tontolo ambanivohitra. Ohatra ilay haintany nitranga ny taon-dasa naharatsy ny vokatra. Iza ary no hiantoka ny fatiantoka raha nisy nindram-bola kanefa tsy afaka ny hamerina?
Noho izay indrindra, ataon’ny fanjakana ho laharam-pahamehana ny fanamboarana sy ny fanadiovana ny tambajotran’ireo lakandrano manondraka tanimbary midadasika. Eo ihany koa ny fananganana tohadrano vaovao. Any Alaotra, ohatra, sompitr’i Madagasikara, hanome vola hatrany amin’ny 80 miliara ary ny Japoney hanaovana izany asa izany. Tsy ho rahampitso ny vokany azo tsapain-tanana amin’izao tetikasa izao.